dhul gariir Talyaaniga ku dilay ku dhawaad 300 oo qof
Home WARARKA dhul gariir Talyaaniga ku dilay ku dhawaad 300 oo qof
Dhul gadhiidh xoog leh ayaa ku dhuftay badhtamaha Talyaaniga, meel aan ka fogayn gobolkii uu bishii Agoosto dhul gariirku ku dilay ku dhawaad 300 oo qof. 6.6 qiyaasta Richter ee lagu cabbiro dhul gariirka ayaa lagu qiyaasay, mana jiraan warar ku saabsan waxyeello uu dad u gaystay, marka laga reebo dhismeyaal uu burburiyey.
Hay’adda Maraykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in xuddunta dhul gariirka ay ahayd meel 68 KM koofur-bari kaga beegan gobolka badhtamaha ku yaalla ee Perugia, una dhow magaalada yar ee la yiraahdo Norcia.
Baadariyaal jooga kaniisad ku taalla Norcia ayaa Twitter soo dhigay sawirro laga soo qaaday kaniisadda St Benedict oo dhul gariirku uu baabi’iyey. Dad naxsan oo halkaa deggan ayaa isugu soo baxay barxadaha iyo jidadka markii uu dhul gariirku dhacay ka dib (09:40 Afrikada bari), sida ay wakaaladda wararka ee AP ku soo warrantay.
Previous articleBerbera: Madaxdhaqameed iyo haldoor hadhimo-sharafeed u sammeeyay Wasiirka Biyaha-Daawo
Next articleDaawo Somali Week Festival Yurub Geenyo, Furlinle, Caabi iyo Kaltuun Bacaado Somali 2016